January 10, 2020 – Voice of Myanmar
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ မိုးယံ(VOM) ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းက သေဆုံးပုပ်ပွနေတဲ့ အသက် ၄၄ နှစ်ခန့်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ သေမှုသေခင်းဖွင့်ပြီး ဓမ္မတာအတ်ုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းကနေ သိရပါတယ်။ ‟သေဆုံးသူမှာတော့ ဒဏ်ရာမရှိပါဘူး။ သေတာကတော့ သုံးရက်လောက်ရှိပြီလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။နေအိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေတာပါ ၊ ပြီးတော့သူကရာအိမ်မှူ းလို့သိရတယ်။ သတင်းရလို့ သက်သေတွေနဲ့အတူ သွားကြည့်တော့ သူ့အခန်းက အတွင်းကနေ လော့ချထားတယ်၊ ဖျက်ပြီးဝင်ရတာ ကုတင်ပေါ်မှာ အလောင်းကိုတွေ့တာ၊ ခြင်ထောင်ကထောင်ထားတယ်၊ အပြင်ကိုအနံ့ထွက်နေတယ်လို့ ” ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးပိုထွန်းကပြောပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ အထက်ဘလောက်က၊ ပထမထပ် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ အနံ့တွေထွက်နေတယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူတွေက သတင်းပေးတဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့က ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ နေအိမ်မှာတစ်ဦးတည်းနေထိုင်တဲ့ အသက်( ၄၄) နှစ်ခန့်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးနေပြီး…
Exclusive Interview with Dr. Myo Nyunt, NLD spokesperson
Chinese president Xi Jinping is going to visit Myanmar soon, when the two country is about to celebrate 70 years of close relationship. His visit is coincident with the hardship, Myanmar is facing internationally and internally, including the genocide lawsuit at ICJ. Voice Of Myanmar’s editor Ko Aung Htoo Naing meet with U Myo Nyunt, spokesperson of National…
English, Interview, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, သုံးသပ်ချက်, အင်တာဗျူးLeaveacomment
Chinese president Xi Jinping is going to visit Myanmar January 17 -2020, when the two country is about to celebrate 70 years of close relationship. His visit is coincident with the hardship, Myanmar is facing internationally and internally, including the genocide lawsuit at ICJ. Voice Of Myanmar’s editor Ko Aung Htoo Naing meet with U Maung Maung Soe,…
ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ မီဒီယာတွေကို သတိပေးစာထုတ်ပြန်မယ်
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀-၂၀၂၀ အောင်ထူးနိုင်(VOM) သတင်းကိစ္စရပ်တွေကိုအကြောင်းပြပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေတဲ့မီဒီယာတွေကို သတိပေးစာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ ဒီကနေ့နေ့လည်က မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ လစဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းရယူခွင့်ဆိုင်ရာသင်တန်းတွေ၊ သတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက် မီဒီယာဥပဒေနဲ့အညီ သတင်းရေးသားခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေ၊ အငြင်းပွားမှုနဲ့ တိုင်ကြားမှုများ ဖြေရှင်းရေးကော်မတီရဲ့ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ တိုင်ကြားမှုဆိုင်ရာတွေအပြင် သတင်းသမားအချို့ သတင်းရယူရာမှာ ငွေကြေးတောင်းခံ နေတာတဲ့အတွက် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ #VOM #voiceofmyanmar #သတင်းမီဒီယာကောင်စီ #သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ Zawgyi ပိုက္ဆံေတာင္းတဲ့ မီဒီယာေတြကို သတိေပးစာထုတ္ျပန္မယ္ ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀-၂၀၂၀ ေအာင္ထူးႏိုင္(VOM) သတင္းကိစၥရပ္ေတြကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ပိုက္ဆံေတာင္းေနတဲ့မီဒီယာေတြကို သတိေပးစာထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ ဒီကေန႔ေန႔လည္က ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ လစဥ္ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေကာင္စီရဲ႕တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သတင္းရယူခြင့္ဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာသမားေတြအတြက္ မီဒီယာဥပေဒနဲ႔အညီ သတင္းေရးသားျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ၊…
ကူကီးအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ နိမ့်ချဆက်ဆံခံရခြင်းတွေ ကြုံတွေ့နေရ
တမူး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ ဂေါင်ဂေါင်(VOM) ကူကီးအမျိုးသမီးတွေဟာ ရှေးရိုးစွဲအယူအစတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ခံနေရပြီး မိသားစုအတွင်း သမီးဖြစ်သူတွေဟာ အိမ်ထောင်ကျသည်ဖြစ်စေ၊ မကျသည်ဖြစ်စေ အမွေဆက်ခံနိုင်ခွင့်မရှိခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ကျအမျိုးသမီးအနေဖြင့်လဲ လင်မယားကွာရှင်းမှုများတွင် သား/သမီးများကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်ပါဝင်ခွင့်မရှိခြင်း စတဲ့ ကျား/မ တန်းတူမရှိခြင်းတွေကို ကူကီးအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ နိမ့်ချဆက်ဆံခံနေရတယ်လို့ ကူကီးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ “ကူကီးတိုင်းရင်သားများ အများစုနေထိုင်တဲ့ မြို့ရွာများမှာ အိန္ဒိယနယ်စပ်များနှင့် ထိစပ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးများ အလွယ်တကူ ရောင်းဝယ်ခွင့်များရှိသဖြင့် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူငယ်များအပြင် အမျိုးသမီးများပါ မူးယစ်ဆေးဝါသုံးစွဲမှုများရှိနေပါတယ်၊ တာဝန်ရှိသူများမှလဲ မူယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပက်သက်ပြီး နိမ်နှင်းမှုများကို နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေတာကို ဝမ်းသာပါတယ် ၊ ထိရောက်တဲ့ဖမ်းဆီးမှုများဖြစ်ရန် နယ်မြေခံပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်စေချင်တယ်”လို့ ကူကီးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်နိမ်ခိုဟက်ကပြောပါတယ်။ ကူကီးအမျိုးသမီးတွေ နိမ့်ချဆက်ဆံခံနေရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး တမူးခရိုင်၊တမူးမြို့ နယ် အထက်ပိုင်းကျွန်ပင်သားကျေးရွာတွင် ၂၀၂၀ ၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့နဲ့ ၉…
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပင်မဆောင်၀င်တဲ့အပေါက်တွေကို ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ယာယီပိတ်
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ လင်းခိုင်(VOM) မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း အဓိပတိလမ်းရှိ ပင်မဆောင်၀င်တဲ့တံခါးပေါက်တွေကို ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က လုံခြုံရေးအရ ယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ food court နဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ အချိန်ဆွဲနေတာ(၄)လကြာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် မနေ့ ဇန်နဝါရီ၉ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီး ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့က သပိတ်စခန်းပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ပင်မဆောင်ရှေ့မှာ သပိတ်စခန်းပြန်ဖွင့်မှာကို မလိုလားတဲ့အတွက် ခုလိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ “ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့က လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥက္ကဌကို ဖုန်းဆက်မေးတယ်၊ သူကလည်း ရန်ကုန်ရေးနေတဲ့အတွက် မသိဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒီအနေအထားက ပါမောက္ခချုပ်က လုံခြုံရေးနှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကို အသုံးချပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ခိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ ပါမောက္ခချုပ်အနေနဲ့ မလျော်ဩဇာသုံးတယ်လို့ထင်တယ်၊ ‌ကျောင်းသားကဒ်နဲ့၀င်မှ ရမယ်ဆိုတော့ တချို့ ဒီဂရီကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေလာရင်အဆင်မပြေဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါတယ်”လို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ကိုဝေယံထက်ကပြောပါတယ်။…
လူဦးရေသန်း ၈၀ ကျော်မှာ ဆင်းရဲသား ၁၇ ဦးသာရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခု တရုတ်နိုင်ငံမှာထွက်ပေါ်
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ-၁၀-၂၀၂၀ မျိုးဆက်(VOM) တရုတ်နိုင်ငံရှိ လူဦးရေ သန်း ၈၀ ကျော်နေထိုင်တဲ့ ဂျင်ဆုပြည်နယ်မှာ လူ ၁၇ ဦးသာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ခံစားနေရတယ်လို့ ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်တစ်ခုအောင်မြင်ပြီးနောက် တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၆၃ အောက်ဝင်ငွေရှိသူဟာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်လို့ ဂျင်ဆုပြည်နယ်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေကြားမှာ မေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိနေပြီး ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေနဲ့ သူတောင်းစားတွေ မရှိဘူးလားလို့ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးက ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ဂျင်ဆုပြည်နယ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အချမ်းသာဆုံးပြည်နယ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်း နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရ ပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်သတ်မှတ်ချက်တွေ အရ လူဦးရေ ၂ ဒသမ ၅၄ သန်းဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေသူ…
၂လအတွင်း Business Plan မတင်ပြနိုင်တဲ့ စက်မှုဇုန်ထဲက မြေကွက်လွတ်တွေကို ဂရံပယ်ဖျက် မြေပါမစ်ပယ်ဖျက်မယ်
၂လအတွင်း Business Plan မတင်ပြနိုင်တဲ့ စက်မှုဇုန်ထဲက မြေကွက်လွတ်တွေကို ဂရံပယ်ဖျက် မြေပါမစ်ပယ်ဖျက်မယ် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၀ -၂၀၂၀ သိဂီ ၤ(VOM) မြေကွက်ဝယ်ထားပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုမရှိတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း စက်မှုဇုံတွေထဲက မြေကွက်လွတ်တွေကို ဂရံပယ်ဖျက် မြေပါမစ်ပယ်ဖျက်ဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်မှုဇုန်တွေထဲက မြေကွက်လွတ်တွေမှာ ဘယ်လို Business Plan တွေလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကို အချိန် ၂ လအတွင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဆီ ဇုန်အလိုက်တာ ဝန်ရှိသူတွေက တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်လို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မတင်ပြနိုင်ခဲ့ရင် တော့ မြေဂရံပယ်ဖျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ” ၂ လအတွင်း စက်မှုဇုန်မြေကွက်လွတ်တွေအကုန်လုံး အဲ့ဒီနေရာမှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ business plan တင်ပြရမယ်။ မတင်ရင် ၂ လကျော်တာနဲ့ အဲ့ဒီlist ပေးရမယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကို ပြန်တင်ပြရမယ်။ စက်မှုဇုန်တွေထဲ မြေဝယ်ထားပြီးအသုံးမချသူတွေ ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။…
အခြေ ခံလုပ်ခလစာ ထပ်တိုးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ ရေရှည်ရပ်တည်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင်
အခြေ ခံလုပ်ခလစာ ထပ်တိုးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ ရေရှည်ရပ်တည်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင် ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ သိဂီ ၤ(VOM) အခြေခံလုပ်ခလစာ ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် လုပ်ငန်းရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေချာညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အလုပ်မှုဆောင် ကိုရဲထွဋ်တင်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံလုပ်ခလစာဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် နည်းနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့တွက်ရင်တော့ လုပ်ခလစာတစ်ကြိမ်တိုးသတ်မှတ်တိုင်း ရာခိုင်နှုန်းက အများကြီးတက်သွားတာဖြစ်ပြီး ဒီဒဏ်ကို ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ” နိုင်ငံတကာမှာလည်း လုပ်ခလစာက ၂ နှစ်တစ်ကြိမ် သတ်မှတ်တယ်။ဒီမှာလည်း ဝန်ထမ်းတွေက မလောက်ဘူး ပဲအော်ကြတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် ကျတော်တို့ ပြည်တွင်းဖြန့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ အရင် လုပ်ခလစာ ၃၆၀၀ တုန်းက မုန့်တစ်ထုပ် ၂၀၀ ခု ၄၈၀၀ ပဲ ။ အမြတ်ကပိုမလာဘူး။ ပိုပြိးဈေးတက်ရောင်းလဲမရဘူး။အမြတ်အစွန်းနည်းလာတယ်။ နောက် စရိတ်တွေကြီးလာတယ်။မီတာခတွေတက်လာတယ်။ဒီတိုင်းဆို…